Umqeqeshi weBafana uphoqeleke ukuthi enze izinguquko eqenjini | Scrolla Izindaba
Umqeqeshi weBafana uphoqeleke ukuthi enze izinguquko eqenjini
Umqeqeshi weBafana Bafana uMolefi Ntseki uphoqeleke ukuthi enze izinguquko ngemizuzu yokugcina eqenjini lakhe.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi amaqembu akuleli asebenzise isinqumo semithetho ye-Fifa Covid-19 njengezaba zokuvimba umqeqeshi ekukhetheni abadlali abazodlala emidlalweni kazwelonke.
UNtseki kulindeleke ukuthi abize abazongena ezikhundleni zikaThulani Serero, uBongani Zungu, uKeagan Dolly kanye noDean Furman abangadedelwanga amaqembu abo.
UNtseki kulindeleke ukuthi amemezele amagama abadlali abazothatha izintambo ngemuva kwemidlalo yangeSonto ye-DStv Premiership.
Ngenxa yemithetho yamanje ye-Covid-19, abadlali abazohambela le midlalo e-Afrika manje sekufanele baqale bagonqe izinsuku eziyishumi uma sebebuya emakilabhini abo aphesheya kwezilwandle.
NgoLwesine, iBafana izobhekana neGhana kowokuhlungela i-African Cup of Nations Group C e-FNB Stadium e-Soweto ngehora le-6 ntambama.
Into ayijabulelayo uNtseki ukuthi uPercy Tau kulindeleke ukuthi abe khona kulo mdlalo. UTau ubengalitholi ithuba lokudlala kuBrighton e-England kanti futhi iqembu limdedelile.
Abanye abadlali akwazile ukubathola uNtseki kubalwa uSiyanda Xulu ozinze e-Isreal kanye noThibang Phete bese kuba uLuther Singh kanye noLyle Foster abazinze e-Portugal.
IGhana kanye neBafana ibabembene ku-Group C ngamaphuzu ayisishiyagalolunye iqembu ngalinye.
IBlack Stars ihamba phambili ngokushaywa kwamagoli kanti umdlalo wangoLwesine unganquma ukuthi ngubani ozonqoba bese elungela i-Africa Cup of Nations yango-2022 e-Cameroon. NgoLwesithathu iSudan, esendaweni yesithathu eqoqweni ngamaphuzu ayisithupha, izobhekana neSao Tome.
ISudan kulindeleke ukuthi iwine ukuze lokho kufake ingcindezi kuGhana kanye neBafana esesicongweni.
Ngemuva komdlalo wase-Ghana, iBafana izovakashela e-Sudan emdlalweni wokugcina wamaqoqo eqembu ngeSonto. Ngosuku olufanayo, iBlack Stars izokwamukela iSao Tome.